Dysphagia (အစာမြိုရခက်ခဲခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Dysphagia (အစာမြိုရခက်ခဲခြင်း)
Dysphagia (အစာမြိုရခက်ခဲခြင်း) ကဘာလဲ။
ရေးသားသူ Dr. Khin Yin Kyay ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe
လည်ချောင်းနှင့် အစာအိမ်ကိုဆက်ပေးသော ကြွက်သားပြွန်အရှည်ကို အစာရေမြိုပြွန်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ၎င်းအစာရေမြိုပြွန်ဟာ 20 cm လောက်ရှည်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ၎င်းကို mucosa လို့ခေါ်တဲ့ စိုစွတ်တဲ့ ပန်းရောင်အသားစ တစ်ရှူးနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။
အစာရေမြိုပြွန်ဟာ လေပြွန်နဲ့ နှလုံးရဲ့ အနောက်မှာရှိပြီး ကျောရိုးရဲ့ အရှေ့မှာရှိပါတယ်။ အစာအိမ်သို့ မဝင်ခင်လေးမှာ အစာရေမြိုပြွန်ဟာ ရင်ဝမ်းခြားကြွက်သားကို ဖြတ်ရပါတယ်။
အစာမျို၍ မရခြင်းဆိုတာ သင့်ပါးစပ်ထဲမှ အစာ သို့မဟုတ်ရေဟာ သင့်အစာအိမ်သို့ ရောက်ရှိသွားရန် အချိန်ပိုယူ၊ အားပိုယူရ ခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ သင့်ရဲ့လည်ချောင်း သို့မဟုတ် အစာရေမြိုပြွန်မှာ ပြသနာတစ်ခုခုရှိနေတဲ့ လက္ခဏာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်အစာအမြန်စားတဲ့အခါ သို့မဟုတ် အစာကိုကျေညက်အောင်ဝါး မစားတဲ့အခါ သင့်ပါးစပ်ကနေ အစာအိမ်အထိ အစာရေမြိုပြွန်တစ်လျှောက် ဖြတ်သွားသော အစာနှင့် အရည်တွေကြောင့် ဒီလိုလက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် များသောအားဖြင့် စိတ်ပူစရာ မလိုပါဘူး။ သို့သော် အမြဲတမ်းအစာမျိုရာမှာ နင်နေမယ်၊ ခက်ခဲနေမယ်ဆိုရင် ဆိုးရွားတဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေတစ်ခု ကိုဖော်ပြနေတာ ဖြစ်ပြီးကုသမှု လိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်။
Dysphagia (အစာမြိုရခက်ခဲခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ အလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ လူတိုင်းမှာဖြစ်နိုင်သော်လည်း အသက်အရွယ် ကြီးသူများ၊ ကလေးများနှင့် ဦးနှောက်သို့မဟုတ် အာရုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသနာရှိသူများတွင် ပိုပြီးအဖြစ်များပါတယ်။
Dysphagia (အစာမြိုရခက်ခဲခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
• အစာမျိုသောအခါ နာကျင်ခြင်း၊
• အစာမျို၍ မရခြင်း၊
• သင့်ရဲ့လည်ချောင်း သို့မဟုတ် ရင်အုံ သို့မဟုတ် ရင်ညွန့်ရိုးရဲ့အနောက်တွင် အစားများ နင်နေသည့် ခံစားမှုရခြင်း၊
• အစာများပြန်၍ ပျို့တက်လာခြင်း၊
• အစာ သို့မဟုတ် အစာအိမ်မှ အက်စစ်များသင့်ရဲ့ လည်ချောင်းသို့ ပြန်ကန်တက်လာခြင်း၊
• အကြောင်းအရင်း မရှိပဲကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျလာခြင်း၊
• အစာမြိုချတိုင်း သီးခြင်း သို့မဟုတ် ချောင်းဆိုးခြင်း၊
• အစာမြိုသောအခါ ခက်ခဲခြင်းကြောင့် အစာများကို အစိတ်အပိုင်းအသေးလေးများဖြင့် ဖြတ်တောက်ပေးရခြင်း သို့မဟုတ် အချို့အစာများကို မစားနိုင်ခြင်း
သင့်မှာ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်တွေထဲက တစ်ခုခုရှိခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။ အစာမြိုရ ခက်ခဲလာခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ အစားများပြန်၍ ပျို့တက်ခြင်း သို့မဟုတ် အန်ခြင်းစတာတွေဖြစ်ပြီးနောက် အစာမြိုရ ခက်လာပြီဆိုလျှင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။
Dysphagia (အစာမြိုရခက်ခဲခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အစာရေမြိုပြွန်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ခြင်းကြောင့် အစာမြို၍ မရခြင်းဆိုတာ အစာမြိုတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ လည်ချောင်း သို့မဟုတ် သင့်ရဲ့ ရင်အုံ အခြေမှာအစာများတွယ်ကပ် နေခြင်း သို့မဟုတ် အစာများအောက်သို့မကျဟု ခံစားရခြင်းကို ခေါ်ပါတယ်။
တစ်ချို့သော အကြောင်းအရာတွေကတော့ လည်ချောင်းနှင့် ရေမြိုပြွန်ကို အစာများဖြတ်တဲ့ အခါကူညီပေးတဲ့ ကြွက်သားနှင့် အာရုံကြောများ ကောင်းကောင်းအလုပ် မလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ အောက်ပါတို့ ရှိမယ်ဆိုရင်လည်း အစာမမြိုနိုင်ခြင်းကို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လေဖြတ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ဦးနှောက် သို့မဟုတ် ကျောရိုးတွင်းရှိ အာရုံကြောမ ကြီးထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရထားခြင်း၊
ပိုလီယို အကြောသေရောဂါဖြစ်ပြီးနောက် အာရုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသနာအချို့ ဖြစ်ခြင်း၊
ဦးနှောက်နဲ့ ကျောရိုး အာရုံကြောမကြီးရှိ အာရုံကြောများတွင် အဆီဖုံးလွှာ ပျက်ယွင်းသည့်ရောဂါ ဖြစ်ခြင်း၊
ကြွက်သားများ အားနည်းခြင်းနှင့် သေးသိမ်ခြင်းတို့ဖြစ်စေသောရောဂါ ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် Parkinson ရောဂါစတဲ့ အာရုံကြောစနစ်ကို ပျက်စီးစေသော ရောဂါများဖြစ်ခြင်း၊
ခန္ဓါကိုယ်ရှိ ကြွက်သားအမျိုးမျိုး ရောင်ရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ကြွက်သားအရေပြားများရောင်ရမ်းခြင်း စတဲ့ ရောင်ခြင်း၊ ဖောင်းခြင်းနှင့် အားနည်းခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ ကိုယ်ခံအားဆိုင်ရာ ရောဂါများရှိတဲ့ အခါ ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အစာရေမြိုပြွန် ကြွက်သားများ ဆန္ဒမဲ့ ဆက်တိုက်ကျုံ့ညစ်ခြင်း၊ ဆိုလိုတာကတော့ အစာရေမြိုပြွန်ရဲ့ ကြွက်သားများ ရုတ်တရက် ညှစ်ခြင်းကိုခေါ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ဒီလိုဖြစ်ခြင်းက အစာအိမ်ထဲသို့ အစာများ မရောက်အောင် တားဆီးသလို ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
အရေပြားထူခြင်း ဒီအခြေနေကတော့ အစာရေမြိုပြွန်ရဲ့ အသားစ တစ်ရှူးတွေဟာ ထူလာပြီး ကျည်းလာခြင်းကို ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုအရေပြား ထူလာခြင်းက အစာရေမြိုပြွန်အောက်ပိုင်း ကြွက်သားတွေကို အားနည်းအောင်လည်း လုပ်ပြီး အစာတွေနဲ့ အစာအိမ်မှ အက်စစ်တွေကို သင့်ရဲ့ လည်ချောင်းနှင့်ပါးစပ်သို့ ပြန်ကန်တက်လာအောင် ဖြစ်စေပါတယ်။
သင့်ရဲ့ လည်ချောင်း သို့မဟုတ် အစာရေမြိုပြွန်မှာ တစ်စုံတစ်ခု ပိတ်နေခြင်း တကယ်လို့ သင်ဟာ အောက်ပါရောဂါတွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်း အစာမမြိုနိုင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်ခြင်းရောဂါ အစာအိမ်မှ အက်စစ်တွေမှာ သင့်ရဲ့ အစာရေမြိုပြွန်ကို ပုံမှန် ပြန်တက်နေမယ်ဆိုရင် သင့်အစာရေမြိုပြွန် မှာအနာများဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီအနာတွေဟာ အနာကျက်ပြီးတဲ့အခါ အမာရွတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီအမာရွတ်တွေဟာ သင့်ရဲ့ အစာရေမြိုပြွန်ကို ကျဉ်းမြောင်းစေပါတယ်။ အစာရေမြိုပြွန် ရောင်ရမ်းခြင်း ၎င်းအခြေအနေဟာ အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်ခြင်း သို့မဟုတ် အစာရေမြိုပြွန်ပိုး ဝင်တဲ့အခါ သို့မဟုတ် သင့်အစာရေမြိုပြွန်မှာ ဆေးနင်နေတဲ့ အခါတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုအစာရေမြိုပြွန် ရောင်ရမ်းခြင်း ဟာမတည့်သော အစာများ နှင့် ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် လေထဲမှာ အရာများနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း စတာတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Diverticula ဟု ခေါ်သောအိတ်ငယ်များ သင့်ရဲ့ အစာရေမြိုပြွန် သို့မဟုတ် လည်ချောင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခြင်းအစာရေမြိုပြွန်တွင် အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ အကျိတ်တွေဟာ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ အကျိတ်တွေရှိသလို ကင်ဆာမဖြစ်နိုင်တဲ့ အကျိတ်များလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
ပြန်ရေကြောအဖုများ၊ အကျိတ်များ သို့မဟုတ် ကျောရိုးအဆစ်များမှအရိုးအတက်များ စတာတွေဟာ သင့်ရဲ့ အစာရေမြိုပြွန် ကိုဖိနေမယ်ဆိုရင် ဒီလိုလက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Dysphagia (အစာမြိုရခက်ခဲခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အသက်အရွယ်ကြီးလာခြင်း ပုံမှန်အားဖြင့် အသက်ကြီးလာတဲ့ အခါမှာလည်း အစာရေမြိုပြွန် ဟာ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်း လောကဓံ များစွာ ခံစားခဲ့ရတဲ့ အတွက်လည်း အစာမြိုရခက်ခဲခြင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အချို့သောရောဂါ အခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့ လေဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် Parkinson ရောဂါ ခံစားနေရတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာလည်း အစာမြိုရခက်ခဲခြင်း ပြသနာဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။ အချို့သောရောဂါအခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါပြသနာများမှာလည်း အစာမြိုရ ခက်ခဲခြင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Dysphagia (အစာမြိုရခက်ခဲခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဘေရီယမ် အရည်မြို၍ X- Ray ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ဆရာဝန်က သင့်ရဲ့ အစာရေမြိုပြွန်မှ ပုံပန်းသွင်ပြင် ပြောင်းလဲမှုနဲ့ ကြွက်သားပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေကို သေချာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြိုချပြီး အစာရေမြိုပြွန်နှင့် လှုပ်ရှားမှုကို လေ့လာခြင်း။ ဒီလိုလေ့လာရမှာ ရလာတဲ့ဓါတ်ပုံတွေက သင့်ရဲ့ ပါးစပ်နှင့် လည်ချောင်း ကြွက်သားတွေ အချိတ်အဆက်မိမိ လှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း ရှိမရှိစတာနဲ့ အစာရေမြိုပြွန်မဟုတ်ပဲ လေပြွန်ထဲကို အစာတွေဝင်သွားသလားဆိုတာ လေ့လာလို့ရပါတယ်။
• ပါးပြီးကွေးဆန့်လွယ်တဲ့ ပစ္စည်းကိုထည့်ပြီး သင့်ရဲ့ အစာရေမြိုပြွန်ကို မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း
• FEES ဟုခေါ်သော မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းနည်းဖြင့် camera အကောင်းစားကို သုံးပြီး မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း၊
• Manometry ဟုခေါ်သော အစာရေမြိုပြွန် ကြွက်သားများကို စစ်ဆေးခြင်း
• scan များရိုက်ခြင်း၊ ၎င်းမှာ CT scan လည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ CTscan မှာဆိုရင် ဓါတ်မှန်ရိုက်သော မြင်ကွင်းများစွာနဲ့ computer မှာစီမံခန့်ခွဲမှု များစွာပူးပေါင်းပါဝင်ပါတယ်။
Dysphagia (အစာမြိုရခက်ခဲခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သင်စားနေတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ပြောင်းလဲပါ။ သင့်ဆရာဝန်က မြိုချရတာ ပိုလွယ်စေမယ့် အစာနဲ့ အရည်များကို စားသုံးဖို့ရန် သင့်ကိုပြောပါလိမ့်မယ်။
အစာရေမြိုပြွန် ကိုချဲ့ပေးခြင်း ဒီကုသမှုမှာ သင့်ရဲ့ အစာရေမြိုပြွန် ကိုပစ္စည်းတစ်ခုထည့်ပြီး ကျဉ်းမြောင်းနေတဲ့ နေရာတွေကို ဂရုတစိုက် ချဲ့ပေးဖို့ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီကုသမှုမှာတော့ သင်ဟာ တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ကုသမှုခံယူရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသခြင်း တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ အစာရေမြိုပြွန် မှာအကြိတ် သို့မဟုတ် diverticula အိတ်ငယ်ကဲ့သို့ အရာအချို့ ပိတ်နေမယ်ဆိုရင် ၎င်းကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရာ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူရန် လိုအပ်ပါတယ်။
အစာရေမြိုပြွန် အောက်ပိုင်း ကြွက်သားထိခိုက်ခြင်း့ ပြဿနာရှိတဲ့လူတွေမှာလည်း တစ်ခါတစ်ရံ ကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဆေးသောက်ခြင်း တကယ်လို့သင့်မှာ အစာအိမ် အချဉ်ပေါက်ခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း သို့မဟုတ် အစာရေမြိုပြွန် ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်တဲ့ အစာမြိုရခက်ခဲမှု ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်က ဆေးအချို့ကို ညွှန်ကြားပြီး အစာအိမ်မှာ အက်စစ်များ သင့်ရဲ့ အစာရေမြိုပြွန်ကိုဝင်ရောက်ခြင်းကို တာဆီးအောင် ကူညီပါလိမ့်မယ်။
သင့် အစာရေမြိုပြွန် ဟာပိုးဝင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ များသောအားဖြင့် ပဋိဇီဝ ပိုးသတ်ဆေးများ တိုက်ပြီး ကုသပါလိမ့်မယ်။
Difficulty Swallowing (Dysphagia) – Overview. http://www.webmd.com/digestive-disorders/tc/difficulty- swallowing-dysphagia-overview. Accessed June 12, 2016.
Difficulty Swallowing (Dysphagia). http://www.healthlinkbc.ca/healthtopics/content.asp?hwid=tp23477spec. Accessed
June 12, 2016.Difficulty Swallowing (Dysphagia) – Overview. http://www.webmd.com/digestive-disorders/tc/difficulty- swallowing-dysphagia-overview. Accessed June 12, 2016.